Ijaarsi Paarkii Agroo-Indastirii Bulbulaa maaliif duubatti harkifate?
Ijaarsi Paarkii Agroo-Indastirii Bulbulaa maaliif duubatti harkifate? Featured
Dizaayinii paarkichaa irra deebi’amuun qophaa’e
Finfinnee: Imala misooma dinagdee qonnaan durfamaa gara indastiriitti ce’uuf taasifamaa jiru si’eessuuf mootummaan biyyattii bara 2009 irraa eegalee paarkiiwwan agroo-indastirii qonnaa qindaawoo 17 naannolee afur (Oromiyaa, Amaaraa, Tigiraayiifi Ummattoota Kibbaa) keessatti ijaarsisuuf kan karoorfate ta’uusaa beeksifamaa tureera.
Kanneen keessaa Paarkiin Agroo-Indastirii Bulbulaa isa tokko yoo ta’u, ijaarsisaa akkaataa karoorfameen yoo ilaalamu baay’ee duubatti harkifachaa jiraachuusaa Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa Wiixata darbe wayita raawwii hojii ji’oota jahaa Ministeera Indastirii RFDI gamaggametti ibsuun rakkoonsaa maal akka ta’e gaafateera.
Ministir Deetaan ministeerichaa Doktar Mabraatewu Mallasaa Paarkiin Agroo-Indastirii Bulbulaa irra caalaatti kaampaanii omishaalee fooniifi aannanii dhiyeessuuf akka ijaarsisaa eegalu ta’uusaa dubbatu. Kunimmoo hanqinoota dhiyeessa fooniifi aannanii naannoo Giddugaleessaafi Baha Oromiyaa keessatti mudachaa jiran furuuf kan yaadame yoo ta’u, guyyaatti horiiwwan gaanfaa hanga kuma 9 humna dhiyeessuu danda’u akka qabaatutti karoorfameeraa jedhu.
Raawwiin hojii ijaarsa paarkichaa garuu haala karoorfameen deemaa akka hinjirree eeranii, sababootasaa ibsaniiru. Haala kanaan ijaarsa dura qorannoon hojiilee waliigala paarkichaa kaampaanii Hindiitiin kan gaggeeffame yoo ta’u, isa boodas yeroo jedhame keessatti akka xumuramuuf kallatumaan Korporeeshinii Misooma Paarkiiwwan Indastirii Oromiyaaf kennamuusaa eeru. Kunis, qajeelfama bajata jajjabeessituu paarkiiwwan sadarkaa federaalaatti hojjetamaniif eeyyemameerratti hundaa’uun ministeerichi naannolee arfaniif qoqqooduun beenyaanillee yeroosaa eeggatee akka kaffalamu ta’eeraa, jedhu.
Akka ibsa Doktar Mabraatewutti, rakkoo guddaan duubatti harkifachuu ijaarsa paarkichaa xiyyeeffannoo dhabuu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Kunis, ijaarsa hojichaa saffisiisuuf erga qorannoon gaggeeffamee, akkasumas beenyaan yeroo jedhame keessatti erga kaffalamee raawwatee Korporeeshiniin Misooma Paarkiiwwan Indastirii Oromiyaa abbummaatiin hojjechuu osoo qabuu dhimmamee hinhojjennee jechuun komii qaban Koree Dhaabbii Dhimmoota Indastiriif dhiyeessaniiru. Kunimmoo Korporeeshiin Misooma Paarkiiwwan naannichaa xiyyeeffannootiin hojjechuurratti hanqina qabaachuusaa kan mul’isuudhas jedhaniiru.
Haa ta’u malee, ijaarsi paarkichaa akka saffisuuf manni hojiisaanii bifa adda ta’een deggarsa gochuuf qophiirra jiraachuusaa himanii, wayita ammaallee naannawichatti rakkoolee hawaasummaa waliin walqabatanii ka’uu malan (fkn. bishaan) furuuf qorannoon taasifamaa jiraachuusaa ibsaniiru. Xiyyeeffannoofi sochiin BMN Oromiyaa ammas murteessaa ta’uusaa hubachiisaniiru.
Obbo Kaffaaloo Tulluu ammoo Raawwachiisaa hojii olaanaa Korporeeshinii Misooma Paarkiiwwan Indastirii Oromiyaati. Akka isaan ibsanitti, mootummaan ce’umsa misooma dinagdee saffisiisuuf waggoota sadii dura wiirtulee walitti qabiinsa qonnaa shan (Giggagala Bahaa, Dhiha, Bahaafi Kibba) Oromiyaa keessatti hundeessuuf karoorse keessaa kan Bulbulaa isa tokkoodha. Karoora kana hojiitti hiikuuf Ministeerri Indastirii dizaayinii ijaarsa Paarkii Agroo Indastirii Bulbulaa kaampaanii biyya alaan hojjechiisee Oromiyaaf dursee yaa kennuyyuu malee sirriitti waan hinhojjetamneef, hojiin dizaayinichaa irra deebi’amuun akka hojjetamu ta’eeraa jedhu.
Kunis, dizaayiniin paarkichaa hojjetamuun wayita dhiyaatu kallattiin qilleensaafi kallattiin qilleensa naannawaa paarkichaa(lafichaa) faallaa walii ta’uusaarraa kan ka’e, hoggansi olaanaa BMNO irra deebi’amuun akka hojjetamu murteessuusaa eeranii, kunimoo ijaarsisaa duubatti akka harkifatuuf sababa ta’eeraa jedhu. Ta’us, ka’umsa ijaarsa kamiifuu kallattiin qilleensaa murteessaa waan ta’eef, iddoowwan balfi itti kuufaman, omishaaleen omishamaniifi mana jireenyaa ta’an dizaayinii duraan qophaa’erratti waan hinargisiifamneef irra deebiin sirreessuuf dirqamuusaanii ibsaniiru.
Hojiin dizaayinii boodarra sirreeffamuun hojjetame kunimmoo hojii bareedaafi hundee qabu bu’uuressuuf xiyyeeffannoon BMNO hangam guddaa akka ta’e kan argisiisu waan ta’eef, komiin Ministeera Indastiriitiin Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf dhiyaate qabatama adeemsa hojichaa waliin walbira yoo qabamu sirrii akka hintaane addeessaniiru. Hojiin ijaarsa paarkichaa duubatti harkifatus yeroo hafan keessatti akkaataa karoorfameen waan wabii qabeessa ta’e dachaan hojjechuuf sochii cimaa taasisaa kan jiran ta’uus eeraniiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti wiirtulee walitti qabiinsa omishaalee qonnaa shan ijaarsisuuf karoorfaman keessaa Paarkiin Agroo-Indastirii Bulbulaa isa tokko yoo ta’u, qarshii bil.4.56n ijaaramaa kan jiruudha. Paarkii kana keessatti warshaaleen addaddaa hundeeffamuun omishaalee qonnaa kanneen akka kuduraalee, fuduraalee, fooniifi aannaniifi kanneen biroo fudhachuun akka galteetti kan fayyadaman ta’uu ibsa Obbo Kaffaaloorraa hubatameera. Kunimmoo walitti hidhamiinsa indastiriifi qonnaa kan gabbisu waan ta’eef xiiqiitiin hojjechuu barbaachisa.
Torban kana/This_Week 12410
Guyyaa mara/All_Days 1821830